MORAFENO - TOAMASINA : Raim-pianakaviana iray matin’ny fanafody mampihenjana
Nanjary lasa nahazo vahana tato to any fahafatesana anaty tranon-diopy ny fihinanana fanafody mampatanjaka. 10 juillet 2019
Raha tsiahivina, ny volana febroay, dia ramatoa iray no maty tao amin’ny tranon-dopy tao Valpinson. Ny volana marsa, teratany vahiny iray no maty irery tao amin’ny efitrano fandraisam-bahiny iray tao Morafeno.
Ny sabotsy 6 jolay lasa teo, dia raim-pianakaviana iray 38 taona manambady aman-janaka no maty tao anaty efitrano fandraisam-bahiny mbola tao Morafeno hatrany. Ho an’ ity farany dia raim-pianakavina 38 taona ary manambady aman-janaka ihany koa fa saingy nitondra sakaiza hiara-hatory any amin’ny efitrano fandraisam-bahiny ny sabotsy alina ka ny alahady vao samy hivoaka tao fa saingy fahafatesana no azo.
Ny loharanom-baovao voaangona tamin’ ireo fianakavian-dramatoa, vady voahitsakitsaka, dia nilaza fa vokatry ny fihinanana fanafody sy karazan-java-pisotro mampatanjaka efa nihoatra ny dozin’ny zakan’ny vatany no nahatonga ny fahafatesany ; tamin’ny nifampiresahana tamin’ ireo fianakaviany dia efa nalefa any amin’ny lalam-pirenena fahadimy ny razana. Nohamafisin’ny loharanom-baovao hatrany fa tsy fantatra satria nitsoaka ilay vehivavy niaraka taminy ary tsy nisy fandraisana mombamomba ilay ramatoa tao amin’ny trano fandraisam-bahiny fa an’ ilay lehilahy ihany.